Nantsi indlela esebenza ngayo iWanna Decryptorhlengware, engachaphazeli iiMacs kodwa ethe yasulela izigidi zeewindows zePC | Ndisuka mac
Le yindlela iWanna Decryptorhlengware esebenza ngayo engachaphazeli iiMacs kodwa yosulele izigidi zeekhompyuter zeWindows
Ezi ndaba zinomda omninzi kwaye zisasaza uloyiko olukhulu kwinethiwekhi, kangangokuba sinyanzelekile ukuba sazise bonke abalandeli bethu ngento ebizwa ngokuba yi-ransomware Ufuna ukuchithwa que Iqale ngokusulela iikhompyuter zeTelefonica kwiWindows kodwa isasazeka kwihlabathi liphela ngesantya esibi.
Ukusuka kwinto ebesikwazi ukuyazi, iinkampani ezinje nge Iberdrola, iGesi yendalo, i-BBVA, iLa Caixa kunye neCaja Sabadell, phakathi kwabanye, zichaphazele kwaye abo banoxanduva lokhuseleko lwezi nkampani babeka izandla zabo entloko kwaye babongoze abasebenzi babo ngomzuzu wokugqibela nonxibelelwano olukhawulezileyo ukuba bazicime izixhobo kwaye banqamle ngokwasemzimbeni intambo yenethiwekhi kubo xa kunokwenzeka ukuba banxibelelane neenethiwekhi ze-intranet.
Njengoko ubona into esiza kukuxelela yona kweli nqaku, ngokuqinisekileyo uza kuyibona kwiindaba zanamhlanje kwaye kunjalo kukho i Uhlaselo lwekhompyuter kwihlabathi liphela ngentlawulelo ebizwa ngokuba yiWanna Decryptor exhaphaza ukuba semngciphekweni kwinkqubo yeWindows kwiinguqulelo zayo ezininzi ukuze ikwazi ukosulela iikhompyuter kwaye kamva ibangele ukulahleka kolawulo lwayo, ukuba umntu ochaphazelekayo ahlawule isixa seedola kwii-bitcoins ukuba ufuna isitshixo sokuvula idatha.
1 Yintoni iWanna Decryptorhlengware kwaye isebenza njani
2 Iingcali zezokhuseleko zithetha ngentlekele
Yintoni iWanna Decryptorhlengware kwaye isebenza njani
Ngaphambi kokuba uqhubeke, into yokuqala ekufuneka yenziwe kukuxoxa ukuba yeyiphi na iWanna Decryptorhlengware kwaye isebenza njani. Intlawulelo Yi-malware yekhompyuter ethi, njengabanye, ifakwe kwiikhompyuter ngendlela efihliweyo evela kumsebenzisi kwaye xa umhlaseli eyifaka ekusebenzeni akwenzayo kukuqala ukubethela lonke ulwazi ngokukhawuleza iqulethwe kwizixhobo ezichaziweyo ukuze ukufikelela kulwazi oluchaziweyo, iphasiwedi kufuneka ifakwe, ekungasetyenziswanga kule ndawo kwiikhompyuter ezichaphazelekayo kodwa kwikhompyuter yomhlaseli.
Kuya kufuneka silumke kakhulu kuba kule meko lewareware ibizwa ngokuba yiWanna Decryptor yosulela iikhompyuter ngokusebenzisa ii-imeyile zogaxekile ezineerisithi ezingezizo okanye ii-invoice, izilumkiso zokhuseleko, izaziso ze-imeyile ezingasaswanga okanye ukunikezelwa kwemisebenzi. Ifayile ye-ZIP ithunyelwa kumsebenzisi ethi, xa ingafakwanga uziphu, iqale inkqubo yosulelo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba olu hlobo lwe-malware aluchaphazeli iiPC zekhompyuter kuphela Inokuchaphazela izixhobo zeselfowuni, ibenze ukuba zingafikeleleki kwaphela.
Ukusuka kwinto ebonwe kwisikrini kunye neefoto esele zipapashiwe kwinethiwekhi, abahlaseli bayabuza isixa seedola ezingama-300 kwii-bitcoins ukuba ababhaliswanga ngexesha elithile, ngekhe kubuye mva.
Ngoku, ingxaki ayipheleli apha kwaye kukuba kwiinkampani ezinkulu ezinje ngeTelefonica into eyenzekileyo kukuba ikhompyuter yosulelekile, I-malware isebenza nge-intranet kwaye ichaphazele zonke ezinye iikhompyuter kwaye yiyo loo nto inkampani ibongoze bonke abasebenzi bayo ukuba bacime iikhompyuter zabo. kude kube kukwazisa kwakhona kwaye ukhuphe iifowuni eziphathwayo kwinethiwekhi yeWiFi.
Iingcali zezokhuseleko zithetha ngentlekele
Ukuba unekhompyuter yeWindows kufuneka ulumke kwaye ufake uhlaziyo lwamva nje lokhuseleko olushicilelwe ngu-Microsoft ukugubungela isiphene sokhuseleko, nangona ukuba wosulelekile awusenayo into yokwenza Ngaphandle kokuba uhlawule oko bakucelayo, iingcali ezingaqinisekisi ukuba nje ukuba uhlawule ungasifumana isitshixo.
Ukuba awunazo iinguqulelo zamva nje zeWindows kwaye unayo enye yeenguqulelo iMicrosoft engasayigciniyo, kunzima kakhulu kwaye yile nto kanye eyenzekayo kwiinkampani ezinkulu kuba baninzi abasasebenzisa iWindows XP iikhompyuter.
Inkqubo yokusebenza echaphazelekayo Windows 7, 8.1, Windows 10, Windows Vista SP2, Windows Server 2008/2012/2016) okoko i-malware isebenzisa ubungozi obufakwe kwi I-Microsoft ibhulethini yezokhuseleko ngoMatshi 14 odlulileyo. Nantsi unayo uxwebhu oluxhasayo ukusombulula ingxaki.
Esona sisombululo sisiso kukuba imeko ye unogcino lwedatha ukuze ubuyisele idatha ebhaliweyo, kodwa njengoko sele ucinge, kumaxesha amaninzi oku akwenzeki kuyo yonke idatha ekhoyo kwinkampani.
Okwangoku, le ngxaki ayichaphazeli iikhompyuter kwi-apile yokulunywa, oko akuthethi ukuba sehlisa ukulinda xa sivula kwaye sisebenzisa iifayile ze-ZIP ngaphandle kokwazi imvelaphi yazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Le yindlela iWanna Decryptorhlengware esebenza ngayo engachaphazeli iiMacs kodwa yosulele izigidi zeekhompyuter zeWindows
Ewe, ndifumene isaziso esivela kuMega sokuba umntu othile ufake iakhawunti yam (12/05/2017 10:25 AM) kwaye wayitshintsha iphasiwedi, ejonga imbali yomsebenzi, ivela eFrance isebenzisa i-Internet Explorer (engazange ndiyisebenzise).
Ndisebenzisa iMac kuphela, ihlaziywa ngokukhawuleza kwaye andivulanga naziphi na izinamathiselo kwaye ukuqala kwam ikhompyuter namhlanje, kuthathe ixesha elide ngokungaqhelekanga kunesiqhelo, ndiyidlulisile i-Onyx ngokugqibeleleyo kwaye kuyabonakala ukuba iqhelekile, kodwa ndinamathandabuzo malunga nendlela oku ngekwenzekile ...
Umsindo, imicro kunye ne-USB 3.0 ngaphambili kwi-iMac yakho
Imidyarho yeSky Gamblers, umdlalo wenqwelomoya omtsha oza kwiVenkile yeApple yeMac